Ciidamada Kenya iyo Huwanta la socota oo qabsaday Degmada Badhaadhe
Kismaayo:-Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose ayaa sheegaya in maanta uu dagaal culus ka dhacay Degmada Badhaadhe dagaalkaas oo u dhexeeya ciidamada huwanta oo ay taageerayaan ciidanka dalka Kenya iyo ciidamada Ururka Al-shabaab dagaalka ayaa waxaa uu socday in ka badan 3saac .
Dagaalka ka dhacay Degmada Badhaadhe ayaa waxaa ka qeyb qaatay diyaaradaha dagaalka ay leeyihiin ciidanka dowlada Kenya waxaana markii uu socday in mudo ah dagaalka Degmada Badhaadhe ka baxay ciidamada Al-Shabaab iyaga oo u baxay duleedka Degmada.
Gudoomiyaha Ururka Raaskambooni Sheikh Axmed Madoobe ayaa xaqiijiyey inay Badhaadhe ay qabsadeen, isagoona ku goodiyey in dagaalka ay sii wadi doonaan inta ay gobalka J/hoose ka saarayaan Ururka al-Shabaab.Dagaalka maanta ka dhacay Degmada Badhaadhe ayaa waxaa uu sababay khasaaro leh dhimasho iyo dhaawac iyo barakac baahsan iyada oo ay dadweynihii ay ilaa shalay ka qaxayeen Degmada Badhaadhe.
Dhanka kale Afhayeenka ciidanka militariga dalka Kenya Emmanuel Chirchir ayaa sheegay in ciidamadooda iyo kuwa huwanta ah ay qabsadeen degmada Badhaadhe mar uu la hadlay warbaahinta dalka Kenya wuxuuna xusay in dagaal culus ka dib ay qabsadeen Degmada Badhaadhe .
Cabdi Naasir Cali (Cabdi Yare )